Yiziphi izinsuku ezinhle zeGemini? - Mashi
Imibuzo Nezimpendulo Ezinhle Kakhulu - Ikhalenda Lezinsuku Ezinhle Gemini Mashi
IsithuphaizinsukuNgenyanga ngayinye banenhlanhla ngokukhethekile ye-IGemini. Zimi kanje: NgoJanuwari: 1, 9, 19, 20, 27, no-28.
I-Verse Verse Yethula Izinto Inyanga Yakho Yokuzalwa Yembula Ngawe Januwari izingane ezizalwa ngoJanuwari zithathwa njengezinenkani futhi zizimisele ngamandla lapho zikhula zivame ukuba nokuvelela, lapho uzalwa ngoJanuwari ungumbukeli wabantu uba Abantu ababukayo futhi abafundayo njengendlela yokufunda Izingane zikaJanuwari nazo zinesifiso esikhulu sokufundisa abanye abantu nokuzisiza zizithuthukise. NgoFebhuwari, uma ngabe wazalwa ngoFebhuwari, kungenzeka babe nobuciko obukhulu futhi babe nobuciko ngoFebhuwari -Izingane nazo zihlakaniphe kakhulu Abantu abazalwa ngoFebhuwari banamathuba amaningi okuthi babe ngabacabangi abakhululekile futhi kwesinye isikhathi babe ngabahlongandlebe Into enhle ukuthi bayathintana nabo izingane futhi zazi ukuthi zifunaniIzingane zikaFebhuwari zingaba nolaka ngezikhathi ezithile, kepha futhi zinohlangothi olubucayi Ukuthi Abantu Bayabazisa Ngempela Abantu abazalwe ngoMashi bavame ukuba sc behlakaniphile kakhulu kunabaningi ngenkathi izalwa ngoMashi uvame ukugcina ubuntu bakho bangempela bufihliwe uze wazi umuntu kahle kakhulu Mashi izingane zinhle cishe kuwo wonke umuntu futhi zifuna ukuthi wonke umuntu azwane uKee uthe ukuvumelana kubaluleke kakhulu kuMashi BabiesAbantu abazalwa ngoMashi bathembekile kakhulu Kuyiqiniso kuze kube yilapho lokho kuthenjwa kuphulwa khona-ke ukubhejwa konke kuvaliwe ngo-Ephreli Ephreli Izinsana zivame ukuqina nokugijima, zihlala zibonakala zinabantu abazalwa ngo-Ephreli Bathanda ukunakwa futhi bangabantu abafuna injabulo. Esinye sezizathu ukuthi bahlala begijimile ngoba bafuna i-adrenaline rush yabo elandelayo ngo-Ephreli izingane ngokuvamile azikho amazambane ombhede Uma wazalwa ngo-Ephreli cishe unenqwaba yezenzo nezenzo ezitolo esitolo Kwangathi impilo yakho ingakhanga kakhulu kubantu abaningi bazalwe ngoMeyi, besebenzisa indawo yabo yangakwesobunxele kakhulu kunendawo yabo yobuchopho yangakwesokudla lfte, okusho ukuthi unengqondo kakhulu kunezinombolo namaqiniso okujabula unamaphupho amahle ngenkathi ulele kanye nekusasa lakho uma uzalwa ngoMeyi usebenzisa i-logic emini bese uphupha okukhulu ebusuku.
Izingane zikaJuni Juni zizwela kakhulu akuthathi okuningi ukucasula umuntu owazalwa ngoJuni, kepha ngeke zikwazise lokho ngoba zihlonipha kakhulu izingane zikaJuni zivame ukuthamba-zikhulume, kepha ngenxa yokuzola kwazo, abantu bavame ukubalalela futhi bathatha izeluleko zabo ngokungathi sína. Uma uyingane kaJuni uthanda ukujabulisa abanye abantu lapho ufuna into efana neyomunye umuntu, uma kungenzeka ukuthi ume eceleni kwabanye, uma wazalwa ngoJulayi amathuba okuthi uthola amandla we-Energy man kumnandi ukulengisa phuma nabangane bakho, bona ubuntu bakho obusabekayo futhi ubenze bachithe isikhathi nawe unawo lawo mandla enza abantu basondele kuwe ngoJulayi izingane zihle kakhulu futhi ziyahlekisa Uma Abantu Besho Okuthile Kuwe kuthatha kuphela umzuzwana ukubuya nokuhlekisa ukubuya okungasabekezeleleki Uma wazalwa ngo-AgastiUngenzeka ube yisikhulu sokuphathwaOkungu-Agasti izingane zisebenzisa la makhono obuholi ukuze ziphumelele ebhizinisini nasempilweni yomuntu siquSepthemba izingane zingabantwana bakaSepthemba izingane ezinemininingwane eminingi Uma wazalwa ngoSepthemba kungenzeka ukuthi ungumuntu ofuna ukuphelela, udinga njalo ube nakho konke okuphelele futhi ulindele ukuthi Nakubantu abasempilweni yebhizinisi kanye nasempilweni yakho yangasese kaSepthemba abantwana banamathemba aphezulu kakhulu enhlangano nemininingwane futhi uma othile lls short, Septhemba will be criticized very quickly October October babies are lightly and careless, bazimele ngokweqile lapho uzalwa ngo Kuze kube uSepthemba uvame ukubheka ohlangothini oluhle, uma ungakwazi ukubona uhlangothi oluhle ngokushesha, khona-ke wena kufanele wenze umzamo wokuyithola. Abantu abaningi abazalwe ngo-Okthoba bagcwele ubuhle futhi bayamnandi nomaphi lapho beya khona ngoba izingane zango-okthoba ziba mnandi futhi ziyakhuluma kwenza kube lula ukuthi zenze ubungane ngonovemba, uma wazalelwa kunovember kunezinto inyanga yakho yokuzalwa ekutshela zona ngawe izingane zikanovemba zivame ukuba nenkani enkulu futhi ziyimfihlo kakhulu, lapho ingane kaNovemba igxile impela, amandla okuba ngosayizi aphansi Uma wazalwa ngoNovemba kungenzeka ukuthi unenkani kakhulu futhi uzikhuthaza izingane zangoNovemba kwesinye isikhathi azifuni usizo kunoma ngubani Iphutha, noma ngabe othile enikeza usizo enganeni kaNovemba cishe ngeke balwamukele.
Laba bantu abajabuli ngaphandle kokuthi bangenza okuthile bebodwa uma bengazalwa ngoNovemba Bayakhula, kepha kuphela uma ufuna ukuba nguDisemba Izingane ziba mnandi futhi zithanda ukuba yisikhungo sokunakwa lapho zisegumbini kugcwele abantu konke ukunakwa kumele kube kubo uma wazalwa ngoDisemba mhlampe ukhuthele kakhulu uhleli endlini ubuka i-tv lokho akuyona into yakho intsha yentsha ka-December iyaziqhenya kakhulu futhi ayifuni ukuvumela lutho bazibambe uma bevinjelwa okuthile, abanankinga nokuziphendulela ukulwa ne-ribe sazise esigabeni sokuphawula ngezansi bese ubhalisela ukuthola okuningi kwakho
Iyiphi inyanga elungele iGemini?
Isikhathi sokuqhekeka, Gemini! Amaviki amathathu okuqala kaJulayi angakhiqiza futhi abe nenzuzo uma ulandela uhlelo olulula. Kuncane kuze kube ngoJulayi 22, futhi usukulungele ngokuqinisekile ngemuva kukaJuni, lapho umbusi wakho, uMercury, echitha iningi lenyanga ekubuyiseleni isignali (eGemini akukho ngaphansi!).1. 2021.
Ngabe iGemini inenhlanhla ngemali?
Ngenxa yobunjalo bazo, aIGeminikwesinye isikhathi zingonga futhi zilondolozele ikusasa lazo, kepha imvamisa ziyajabulaunenhlanhlaukuchitha imali okumayelana nokusebenzisa imali yaboimalingesikhathi esihle, noma ngabe siphile isikhathi esifushane kangakanani.
Ukuthanda ukunethezeka nobukhazikhazi, usukulungele ukusebenza kanzima ukukhokhela ukunambitheka kwe-champagne yakho. Iso elibukhali lokutshala imali kanye nobungozi bokuphikisana neTaurus kumbeka endleleni yokuba usozigidi kusukela esemncane. ITaurus ingaba usozigidi ojwayelekile kwamakhelwane uma esebenza futhi esebenzela ukuqongelela imali esikhundleni sokuyisebenzisela izinto.
Ngaphandle kwenhloso yokuthengisa izimpahla zikanokusho, iTaurus kungenzeka ishiye izindlalifa nezigidi zamaRandi eziqonda umqondo wokuqedwa futhi zingenabo ubudlelwano nezinto zakho ozithandayo, kunezinto eziningi ezinhle ezizayo, kepha ngaphambi kokuthi uqhubeke, don ' ukhohlwa ukuhlola isiteshi sethu ukuthola ezinye ezinhle Bhalisela izindatshana ezinjengalezi bese ucindezela isithonjana sensimbi ukuze ungaphuthelwa izibuyekezo! IGemini: Yize ungenasithakazelo sokwenza imali, ezweni elibuswa imithombo yezokuxhumana, uku-element yakho lapho i-Influencers iyinketho ebonakalayo yomsebenzi. Lolu hlobo lomsebenzi likuvumela ukuthi uzithokozise ngezinto eziningi ngasikhathi sinye. Uzothola i-niche bese uhlala kuyo kuze kube yilapho isithukuthezi sikuthumela ukuthi ubheke okuthile okuthakazelisa ngokwengeziwe.
Ungakhubazeka ngephutha empumelelweni yezezimali esikhundleni sokuceba ngoba unaka kakhulu ukuqongelela amaqiniso nolwazi kunemali. Umdlavuza: Umdlavuza ungusomabhizinisi wemvelo. Unekhono lokunikeza abantu abakudingayo nabakufisayo.
Kepha ukuceba kuzohlala kuyinto encane enkalankala, isifiso sayo esikhulu ukwakha okuthile okuzobasiza banakekele abantu babo akuhlangene nokuceba, okungenzeka ukuthi kuyinto enhle ngoba awuzange uzilungiselele lokho kuthatha ukuceba. Ukuze ube mkhulu, imvamisa kufanele uphume endaweni yakho yokunethezeka, ngoba lena ayi-no-no enkulu kuwe. Banokuthambekela kwemvelo kokunikela ngemali yezinto ezihlala njalo, ezizinzile ezifana nezindlu ezithengiswayo nezimali zomhlalaphansi.
Yize ithalente nomoya womuntu uphumelele, uLeo uthola ingcebo yakhe ikakhulukazi ekunakekelweni akutholayo kanye namandla okuveza ukwethembeka kubalandeli bakhe nakubantu abathandayo kungasiza, ezweni lama-selfies, ekufuneni ukunakwa ifomu lobuciko ukudala ingcebo. Ukuthonya nokuziphakamisa akukaze kube nenzuzo enkulu kunanini ngaphambili, futhi lokhu kuyindaba kaLeo. IVirgo: NjengeVirgo, kungenzeka ukuthi awunawo umkhuba wokuba ngusozigidi, kepha lokho akusho ukuthi awukwazi ukuceba.
ILibra ibuye ithambekele ekupheni ngokweqile, okuvela esifiso sokuthandwa yiwo wonke umuntu. Uvame ukuwabalekela amathuba afaka ubungozi obuningi futhi uthembe imizwa yakho ngoba wesaba ukuthi uzokwehlisa umuntu ungaze ucebe. Futhi esikhundleni sokucela usizo noma ukufuna amathiphu, ukholwa ngokuzenzakalela ukuthi akekho ongakukhomba endaweni efanele.
Uthando lwakho lwangempela lungamandla, hhayi imali, kepha uyawazisa impela amandla angathengwa yimali. IScorpio sinamathuba amaningi kunezinye izimpawu eziningi ze-zodiac sokuba ngusozigidi, uma befuna ngempela nalapho iScorpio ifuna okuthile, bazokufa ngaphambi kokuba badele. IScorpio iyaqonda ukuthi hhayi nje ukuqoqa inkokhelo, kepha ukwenza imali ikusebenzele.
Ukutshalwa kwezimali, ikakhulukazi imali ebolekiwe kanye nezinsimbi zezezimali kuyakhanga amathuba okuthola ingcebo emabhizinisini anenzuzo afihliwe futhi angcolile njengokulahlwa kukadoti nokuhlanzwa kwendawo yobugebengu. I-Sagittarius: I-Sagittarius isethubeni elikhulu lokwenza umcebo wayo ekugugeni noma ngokuholwa ngumuntu osekhulile ngoba babona ubusha njengesikhathi sokutholwa nesipiliyoni. Eyaziwa njengesibonakaliso senhlanhla, ungathola umkhuba ngaphandle kwenhlanhla enkulu noma ngesikhathi esifanele.
Ukuthi uhlala isikhathi eside ngokwanele ukuze uzuze entshisekweni yakho kuyindaba ehlukile, kepha inhlanhla yemvelo ikusindisa ekugcineni. ICapricorn: ICapricorn iyisibonakaliso sesibili okungenzeka sibe ngusozigidi futhi ibizoba ngeyokuqala ukube umhlaba ubungumphakathi ophumelelayo. I-CEO ezelwe edonsa kanzima kwezezimali akuyona inketho yeCapricorn ezimisele kahle efanelekile ukwakha umbuso ngokutshala imali nokwenza izinqumo ezihlakaniphile zezezimali.
Kungathatha iminyaka ukwenza umehluko omkhulu, kepha uzothola okufunayo ungakugcobi ebusweni bomuntu. Kodwa-ke, lokhu kungasho amahora amade uwedwa, ukungaqondakali, nokukhetha umsebenzi ngaphezu kobuhlobo ps. Ngaphandle kokuthi ukhubazeke ngokwesaba ukwehluleka, uzobe unqwabelanisa izigidi ngaso sonke isikhathi ukudala hhayi kuphela ukuphepha kepha futhi nefa lomndeni wakho.
Kepha futhi uyihhashi elimnyama eliqoqa buthule ngokuqongelela ingcebo ngokuba yilokho okudingeka ube yikho ukuthola abanye ukuthi bakunikeze imali. Ukumodela, ukulingisa, nokuzijabulisa, amathikithi angaba nenotho yezinhlanzi - noma yini kusuka kumlingisi we-soap opera kuya kosaziwayo be pop. Ungahle ungabi nentshisekelo ngengcebo, kepha ingcebo empeleni iyasiza ekwakheni i-buffer oyilangazelela phakathi kwakho namaqiniso anzima okuphila.
Ingabe uMashi yiGemini?
Uqala inyanga kaMashingokuzethemba nangamandla,IGemini! Ngemuva kwakho konke, iMars iyangenaIGeminivulaMashi3, kukufaka ngentando yokuwina.26. 2021.
Hheyi, amawele. Uyemukelwa ekufundweni kwakho kwesonto likaMashi 22nd. Kuleli sonto sizongena lapha, iGemini, futhi sizobheka amandla akho ajwayelekile njengamanje ngalo mugqa wokuqala.
Emgqeni wakho wesibili, sizobheka izindaba ezibaluleke kakhulu kuwe kuleli sonto. Emgqeni wakho wesithathu sizobheka yonke imilayezo evela kubaqondisi bakho, yonke into, noma isiphi iseluleko, noma yini ofuna ukuyazi, sizoyibuka lapho, futhi ekugcineni ngizodweba amakhadi emibuzo amathathu athi yebo noma cha. Futhi ngizoziphendula lezi futhi nokuthi ngiyazi ukuthi uthini umbuzo wakho.
Ngakho-ke, kufana nokufunda komuntu siqu lapha, amawele, kodwa ake sibone ukuthi yini esinayo eza kuwe, amawele. Namawele, ake sibone lapha, amawele namawele.
Uqala ngalo moya wepigogo. Bukela okwakho iLanga, ukuphuma kwenyanga, uma ngingashongo kanjalo, ukuthola isithombe esigcwele salokhu okwenzekayo kuwe kuleli sonto. Kepha unalo moya wepigogo futhi leli khadi lithi, 'Malikhanye.' Nginomuzwa wokuthi kufanele ube okuthile lapha ngaphandle.
Unezintambo eziyisikhombisa ezikhiyiwe kancane. Nginomuzwa wokuthi kukhona okuzokujabulisa kakhulu. Unalo leli khadi elinenhlanhla, nelinenhlanhla ekugcineni.
Ngakho-ke, kusobala ukuthi inhlanhla iza ngendlela yakho. Kepha ngizwa sengathi kungena ngokudalulwa kokuthile. Kucishe kube sengathi kukhona okuvezwayo lapha, kodwa nginomuzwa wokuthi nguwe okumele ukuveze, yilokho engikutholayo lapha, amawele.
Manje unamakhadi amabili lapha. Banomoya wenja othi, 'Thembeka kulokho okuthandayo.' Futhi unalo moya wezinyamazane othi, 'Yiba mnene.' Leli khadi lingikhumbuza uMbusi futhi angamela okuthile okuletha inala enkulu, iNdlovukazi yamaPhentekoste.
Nginomuzwa wokuthi kunokuthile ongathanda ukukwenza empilweni yakho yomsebenzi, empilweni yebhizinisi lakho, noma yini enjengaleyo. Futhi ngizwa sengathi kufanele ukwenze, neNdlovukazi yamaPentekoste. Kuzokwenza uphumelele kakhulu.
Kwabanye benu, nginomuzwa wokuthi ngandlela thile nilandela inhliziyo yenu lapha, nalokhu kungamandla. Une-ace of wands, i-wands eyisikhombisa nohlangothi lwamaphenti lapha, kukhona okusha okuza lapha kuwe. Uqinisa ukukhwabanisa kokuthile lapha.
Kucishe kufane naleyo ace ye-wands, akunjalo? Kunjengokuthi, ungeza ukuthi i-ace yama-wands ezinkalweni ezimvikelayo, akunjalo. Uvikela isikhundla sakhe phezulu egqumeni. Angicabangi ukuthi uvikela isikhundla sakho ngenhla egqumeni lapha, eGemini.
Ngizizwa nginomuzwa wokuthi wenza okuthile empilweni yakho kufinyeleleke kangcono. Nginomuzwa wokuthi wenza okuthile kube ngokoqobo ngokwengeziwe. Lokhu kungaba ubudlelwano, kufana nokuthi ungathatha ubuhlobo uye ezingeni elilandelayo nalokhu.
Kufana nokuthi usuvele unamaWands ayisithupha phansi, usuzokwengeza ilungelo lakho lesikhombisa? Ngakho-ke ngicabanga ukuthi wenza okuthile okuqinile futhi lokho kuyinto enhle kakhulu, ngizizwa nginawe, noma ngabe wenzani, nginomuzwa wokuthi kuzoba nenala kakhulu, impumelelo enhle, inhlanhla Izinto eziningi ezinhle ngokujwayelekile ngalokhu kufundwa ngakho-ke nginomuzwa noma yini, usuyazi vele, noma yini oyiqinisayo izophumelela kakhulu kuwe lapha. Uqinisekisa ngempela ukuthi kukhona okuhlala unomphela, ngakho-ke uma lobu budlelwano obukubo njengamanje, kufana nokwenza izinto eziyohlala unomphela, kepha wena unasohlangothini lwamaphenti, uthando olusha Ngakho-ke lokho kungaba umyalezo ofanayo kimi, kucishe kufane nokuthi ufunde ukuthi wenzeni ukuze uqiniseke ukuthi ubudlelwane buhlala njalo, futhi manje usukwenza nabayisikhombisa bamaWands ohlangothini lwama-pentacles. Ngakho-ke lapho kungena uthando olusha kufana nokuthi uthatha izinyathelo engizizwayo ukwenza isiqiniseko sokuthi kukhona okuhlala njalo ngamandla we-Seven of Wands.
Into efanayo, umsebenzi noma ibhizinisi, ngizwa sengathi uyathanda, kufana nokuthi lezi zingqimba zimele njengezinto eziyisikhombisa ozifundile ngizizwa ngenza isiqiniseko sokuthi izinto ziyaphumelela empilweni yakho. Futhi kunjalo 'wenza zonke lezi zinto. Ngikuthumelela imilayezo engajwayelekile.
Ngithola imilayezo engajwayelekile yawo wonke umuntu, kepha ngithola imilayezo engajwayelekile yakho lapha, amawele. Kucishe kufane nokuthi ufunde okuthile lapha. Uyazi, ama-wands ambalwa, kwesinye isikhathi ngicabanga kanjalo, uyazi ukuthi kuyinkolelo impela, kufana nokwazi ukuthi uyazi ukuthi uzophumelela, kepha kufana nokuthi awukholwa ukuthi okuzayo, ekugcineni , lapha, le njabulo.
Kodwa ngisho into efanayo kuCapricorn. Futhi uma uneCapricorn khona lapha, yingakho ngikutshela lokhu. Uma uneCapricorn ku-horoscope yakho ngingahlola ukufundwa kweCapricorn.
Ngikuthola umyalezo ofana kakhulu nawe kuleli sonto, iGemini, lapho kusho khona ukuthi usuyikhokhele le njabulo nempumelelo eza kuwe. Kepha kucishe kufane nokuthi awukwazi ukukukholwa uma kuza, kufana kakhulu neCapricorn. Ngingabheka ukube benginguwe ngicabanga ukuthi kunezeluleko eziningi ongazithola kulokhu okufundwayo.
Kepha engingakusho lapha, kucishe kube sengathi usuyikhokhele yonke le nhlanhla futhi futhi iCapricorn ibinomyalezo ofanayo. Kepha ake sicacise lowomugqa bese sibona ukuthi isihogo simayelana nani. Une-Knight of Swords, izindaba ezinhle engikuphathele zona ezivela kuleli khadi.
Amahlanu amaWands, yebo nginomuzwa wokuthi uzivikela kabusha futhi uzibeka eceleni nomncintiswano lapha eGemini naseThe Emperor Here, i-Aries ingakufikela nakanjani. Kwabanye benu ngizizwa nginjenge-Aries, kwabanye ngizizwa njengomuntu one-Aries ku-horoscope yabo, othandana nani. Ungaba njengoVenus no-Aries, ungafana noJupiter no-Aries.
Uyazi, ngizizwa sengathi ngikwelinye lamaplanethi. Angicabangi nokuthi yinyanga yakhe. Kwabanye benu kungahle kube yinyanga, ngokujwayelekile, kepha ngibona sengathi kukhona ohamba kuwe onamandla we-Aries ku-horoscope yabo.
Ziqonde ngqo, ziqondile, zenza ngqo lokho ezikwenzayo ngalesi knight esifunwa yizinkemba futhi aziyeki. Umuntu oqhutshwa kakhulu, okhuthazayo. Nginomuzwa wokuthi lo muntu nakanjani uyisanqante enenduku futhi (ehleka).
Nginomuzwa wokuthi lowo muntu nguyena, futhi engikushoyo ngalokho ukuthi ngibona sengathi lolu uthando olusha kuwe, ngizizwa nginjengaye lo muntu, ukhuthazekile kakhulu, uyazi, ufuna ukufeza okuthile, bona, 'impumelelo ikhuthazwa, futhi lokho akuyona into embi, ngakho-ke kukhona umuntu oshukumiseka kakhulu omdonsela empilweni yakho lapha uma lolu uthando olusha. Kwabanye, ngizizwa njengawe. Ngizizwa sengathi nginguwe 'ngikhuthazwa kakhulu okuthile lapha, futhi ngibona sengathi uzibeka eceleni kokuncintisana nalawa maWands amahlanu kuzo zonke izingxenye zempilo yakho.
Kucishe kube sengathi akekho umuntu ongasondela, yilokho engifuna ukukusho kuwe Gemini. Wenza ngokuphepha lapha. Imibuzo eminingi ifika emqondweni kodwa ngicabanga ukuthi le ivela kwabanye abantu, uma unebhizinisi noma umsebenzi, lapho uphumelela kakhulu, abantu bazizwa sengathi benzani kanti? Kucishe kufane nokuthi abantu abakuqondi nokuthi wenzani ngalesi sikhathi, kodwa qhubeka wenze noma yini oyenzayo emsebenzini noma ebhizinisini, noma mhlawumbe ube nesiteshi se-YouTube.
Ngizizwa sengathi uthola isosi yakho eyimfihlo. Futhi-ke ngizoqhubeka nanoma yini leyo. Ngiyayithanda imilayezo yakho ebaluleke kakhulu kuleli sonto, unekhadi lamandla.
Ngizizwa sengathi ngokusobala uthole amandla amaningi. Une-Emperor lapha, ngakho-ke ngibona sengathi uthola amandla amaningi kunoma yini oyenzayo, njengomsebenzi noma ibhizinisi, noma ngisho nothando. Kulungile, njengamakhadi afuna nje ukuphuma.
Unekhadi lomphakathi kanye nekhadi lokugcwaliseka, nakanjani kukugcwaliseka okuningi kuwe. Ngicabanga ukuthi uma sinokufundwa okufana nalokhu ungathola amandla amaningi ngicabanga ukuthi amakhadi omphakathi afana nalokhu aqhamuka ukusikhumbuza lapha ngabantu ezimpilweni zethu ababalulekile okufanele sikwenze, uyazi, bese kufanele thatha isikhathi sethu, futhi kungashiwo kalula, qiniseka ukuthi uyabakhathalela abantu futhi uyabasiza abantu. Uma unamandla amakhulu, kusho ukuthi, ungazithandi.
Hhayi ukuthi uzoba ngamawele, kepha uyazi ukuthi ngicabanga ukuthi yingakho la makhadi eza ekufundweni okufana nalokhu, kepha nakanjani kukugcwalisa okuningi. UneNdlovukazi yasePentekosteIzintathu Zezinkemba kanye Nezandla Eziyishumi Eziyishumi, ngizwa sengathi abanye benu bebigxile kakhulu ekulweni nale Ndlovukazi yamaPhentekoste, ngibona sengathi yilokho enigxile kukho Ukuqoqa izinsiza zenu, mhlawumbe ngenxa ebuhlungwini benhliziyo udabule izinkemba ezintathu, izintambo eziyishumi, into ebingumthwalo, into ebangele imithwalo eminingi empilweni yakho ngiyayizwa. Futhi ubugxile kakhulu emhlane wakho lapha neNdlovukazi yamaPhentekoste.
Futhi ngicabanga ukuthi kuyinto enhle ngezindlela eziningi, futhi, kodwa mina Engikushoyo ukuthi, ngizizwa njengabaqondisi benu. Uma ubuza noma uthi wakha inala eningi, lawa makhadi wokugcwalisa anokuningi, kepha ngizizwa sengathi abaqondisi bakho lapha bathi, “Hhe, kulungile, kodwa futhi qiniseka ukuthi ubuyisela izinto emgqeni. Sizokhuluma ngalokhu ngomzuzu namaThupha amaPhentekoste.
Kepha nginomuzwa wokuthi uzobona imiphumela ngokushesha okukhulu. Futhi ngibona sengathi lokhu kubaluleke kakhulu kuwe ngizizwa sengathi kungokwesikhashana. Kwabanye benu, ngizwa sengathi nithatha eminye imisebenzi nge-Ten Wands.
Futhi, nginomuzwa wokuthi le mithwalo yemfanelo eyengeziwe ingeyesikhashana. Nginomuzwa wokuthi lokhu ngeke kuthathe isikhathi eside, ngakho-ke futhi, kungenzeka ukuthi uthwala imithwalo eyengeziwe manje, kodwa ngizwa sengathi uyenzela ukufika lapha, lawo mandla okuvimbela, i-Knight of the Pentacles. Kufana nokusebenza kanzima ukwenza isiqiniseko sokuthi awuzivumeli ukuthi ususwe egqumeni ngalezi zingodo eziyisikhombisa.
Kufana nokuzenza uqine manje Gemini, yithande (chuckles). Angeke ngilishaye leliwele, kepha ake sicacise ama-Mugs ayisishiyagalolunye, Wish Fulfillment, Total Satisfaction, inhlanhla ingena lapha njengoba ngishilo, i-Ace of Cups. I-Yep, impela iyelapheka ebuhlungwini benhliziyo nakumaWands Wands, i-Yep iyayithanda.
AmaWands amabili ayahola. AmaWands amabili afana, uyazi ngezindlela eziningi, amaWands amabili kufana nokudedela kwabayishumi eWandsand bese ukhetha izinto ezimbili kuphela, akunjalo. Kepha kuncane kakhulu, kufana nokuthi ukhetha into eyodwa ngoba ufinyelela phambili futhi leyo nduku yangaphambili ibamba ukudlidliza okuqondisayo kulo mugqa lapha.
Ngiyaqonda okuthile ngabathile benu abangafana nezikhundla zobuholi ebhizinisini labasebenzi, ningangena ezikhundleni zobuholi, izinto ezinjalo. Futhi ngicabanga ukuthi uma kunguwe uzoba nempumelelo enkulu nge-Nine of Pentacles. Kwabanye, ngizwa sengathi nguwe oholayo empilweni yakho.
Impela uthando olusha olungena ngemuva kokudabuka kwenhliziyo. Nginomuzwa wokuthi kukhona ongena ngaphakathi, umuntu onentshisekelo enkulu, umuntu okuthola ekhanga kakhulu, umuntu omaziyo ofuna ukukwenza izinto ezihlekisayo nazo zonke lezi ezinye izinto, futhi, ngibona sengathi kunesidingo sokuletha lokho ukuvumela lokho , Ngingasho. Indlovukazi yamaPentekoste, eyisithupha yamaPentekoste.
Kufana nokuthi ungagxila kakhulu emsebenzini. Futhi iSithupha yamaPentekoste ithi ungamvumela kanjani umuntu empilweni yakho uma ufuna uthando. Vele akuwona wonke umuntu ofuna uthando, kepha uma ungathanda bengizomvumela lowo muntu angene.
Ngoba ngizwa futhi ukuthi lokhu kumayelana nokulingana uma ungalufuni uthando, kusakhulunywa ngesisho sikaBalanceit, uyazi, manje sekuyisikhathi sokuzijabulisa. Manje sekuyisikhathi sokwenza ezinye izinto ozijabulelayo ngempilo yakho namaSithupha amaPhentekoste. Kulayini wakho wokugcina lapha kuyo yonke imilayezo evela kubaqondisi bakho, unekhadi elijabulisayo.
Nginomuzwa ngalesi sikhathi uzojabula kakhulu ngeGemini. Elinye ikhadi lomphakathi, hlola lokhu, amakhadi womphakathi amabili. Ngakho-ke qiniseka ukuthi usebenzisa leli khadi lomphakathi ukwaba ingcebo nenjabulo nabantu abasempilweni yakho.
Kepha futhi nginomuzwa wokuthi ungaqaphela umuzwa womphakathi lapha. Kufana nokuthi ungakha umphakathi noma wenze abangane abasha noma uhlangane nabantu abasha. Futhi lokho kuzoba yinto ebaluleke kakhulu.
Kepha okufunwa yimikhombandlela yakho ukuthi wazi ukuthi lapha unamaSithupha amaPhentekoste, amaTwo amaCalices amabili, kanye neThoba lamaPentekoste. Nginomuzwa wokuthi abaholi bakho baphinde bacele ukulinganisela izinto namaThupha amaPentekoste. Ngibona sengathi bayakuqonda ukuthi kukhona inani elithile lomsebenzi noma izinto okufanele uzenze ukufeza izinto empilweni yakho lapha, iGemini.
Kepha nginomuzwa wokuthi nabo bathi kulungile, yebo njengoba sikuqonda, uyazi ukuthi ngicabanga ukuthi izinkomba zakho ziyaqonda, akunjalo? Bayakuqonda ukuthi kufanele senze imali. Ngicabanga ukuthi kukhona okungahambi kahle ngomphakathi ongumoya ufana nalokhu: silapha, asizile ukuzothola ulwazi olungokomoya. Silapha ngokuhlangenwe nakho komuntu.
Kungakho size lapha njengabantu. Size lapha ukuzodala iqiniso lethu. Ngakho-ke ngibona sengathi abaqondisi bakho bayakuqonda lokhu, bayaqonda ukuthi sidinga imali.
Uyaqonda ukuthi sidinga lezi zinto ukuze sakhe iqiniso lethu, akunjalo? Ngakho-ke, ngicabanga ukuthi imihlahlandlela yakho ithi kuwe futhi bathi kimi njengami, yebo, siyakuqonda lokho. Kepha futhi siyaqonda ukuthi kufanele uzijabulise. Kufanele wenze izinto ozijabulelayo futhi kufanele uthathe isikhathi sakho namaPentekoste ayisithupha futhi kungaba njalo, futhi akuyona into embi leyo, yinto enhle leyo.
Futhi, nginomuzwa wokuthi uma nje ulinganisa izinto uzojabula kakhulu, kungaba ukuthi unomsebenzi wokuzilibazisa owuthandayo, mhlawumbe uyakujabulela ukuya kumamuvi futhi empeleni ngeke sikwazi ukukwenza manje, kodwa ubungakwenza bukela i-movie ku-TV yakho, rig ht. Noma ku-iPhone yakho noma into enjalo. Ngicabanga ukuthi kwenye intsha ithi kufanele wenze izinto othanda ukuzenza.
Unezinkomishi ezimbili, eziyisishiyagalolunye ezivela ePentaclesit uzizwa sengathi uzizwa ungashadile, kepha kukhona umuntu ozokuza nalezi zinkomishi ezimbili. Ngokwengxenye enkulu, ngizizwa njengothando olusha ngenxa Yezinkemba ezintathu. Nginomuzwa wokuthi kukhona umuntu omusha osheshayo.
Uma kungumuntu wasendulo angiqondi kahle, kepha abantu bayaqhubeka bebuza. Ngakho-ke ngihlala ngithi, uma kungumuntu wakudala, bengizothi bashintshile kanti nawe ushintshile, okuyisona kimi kuphela isikhathi okufanele uthathe ngaso umuntu. Uma bobabili abantu beguquke ngempela, buyela emuva esikhathini.
Cishe izosebenza, kepha abantu abavamile ukushintsha. Kepha uma benza kanjalo uyazi ukuthi izosebenza ngawo lowo mandla. Bathi usuzofika kuleyo ndawo eluhlaza.
Ngakho-ke uma ukhathazekile, ngiyaqonda ukuthi abanye benu bakhathazekile ngezezimali noma ngokukhathazeka ngokuchichima. Futhi ngibona sengathi inala eningi izongena lapha kuwe, iwele, kepha uneNkosi yamaWands lapha, ama-Cup ayisishiyagalombili kanye nama-Wands amane akumele lapha, ama-Cup ayisishiyagalombili afana nawo, awunjalo nje ngokwakho ngokuqinisekile. Ngicabanga ukuthi izindebe eziyisishiyagalombili ukungaqiniseki ngokuthi kuzokwenzekani ebudlelwaneni.
Ungahle umelane nokuvula ubudlelwano obusha ngoba awunasiqiniseko sokuthi kuzokwenzekani ebudlelwaneni; okungukuthi, ucabanga ukuthi lokhu kuzohlala isikhathi eside? Uma ngingena kulobu budlelwano, ingabe ngizolimala? Ngithola yonke le mibuzo ngobusuku benkomishi. Kepha inkomishi ebusuku ngemuva kwenkomishi ebusuku yizinkomishi eziyisishiyagalolunye. Futhi, lapha, iNdlovukazi yamaPentekoste.
Kufana nokuthi ugxile kakhulu emalini noma emsebenzini wakho, kepha ngibona sengathi udinga ukugxila kwezinye izinto ezingakulethela injabulo, njengothando noma osuvele uyazi, noma nje noma ukuzilibazisa, Izinto othanda ukuzenza Akukwenzi ngisho kufanele kube uthando. Angicabangi ukuthi uthando luzosilethela injabulo kepha uyazi ukuthi lokhu akuyona into engifuna ukuyisho. Engikushoyo ukuthi kunezinye izinto empilweni ngaphandle komsebenzi futhi mhlawumbe ugxile kakhulu othandweni (ehleka).
Ngakho-ke mhlawumbe udinga ukugxila emsebenzini. Angazi, kuzohluka kini nonke, kepha ngithola le nto yokulinganisela lapha. Nginomuzwa wokuthi izinkombandlela zakho zifuna ukuthi ulinganise izinto lapha ngamandla.
Impela ngiyathanda ukuza othandweni lweqiniso ngawe. Njengoba ngishilo, kungahle kube nomuntu one-Aries ekhadini lakhe, futhi ngiyayithanda. Ngikuzwa lokhu, kwabanye benu, futhi bhekani, ninama-Aries nalapha.
Ngiyabazwela abanye benu, imihlahlandlela yenu ifuna nizibeke engcupheni ngaleli khadi lapha. Ngizizwa sengathi ufuna ukuthatha ingozi isb.
Isb. ukuthi ufuna ukuqala, uthathe umsebenzi omusha, noma wenze enye into.
Nginomuzwa wokuthi udinga ukukwenza ngala mandla lapha. Ake sithole imininingwane eminingi ngayo, Gemini. Iyiphi le ngozi ongayithatha? Ama-Wands ayisishiyagalombili, uMnyakazo.
Abanye benu bangahle bathuthe. Unazo lezo eziyisishiyagalombili zezinkomishi, ngisho i-ace yezinkomishi. Kungaba uthando, akunjalo, ukuvumela uthando lungene empilweni yakho.
Mhlawumbe udinga ukuxhumana nothando lomuntu siqu, ama-wands ayisishiyagalolunye lapha. Nokuthile oye wakudela esikhathini esedlule. Nginomuzwa wokuthi leli yithuba lesibili engingakutshela lona.
Mhlawumbe hhayi othandweni, njengoba ngishilo, bengingeke ngikuthathe njengokubuyiswa kwangaphambilini lokhu, yize kuyinto ehlekisayo (ehlekisayo) ukuthi kwenzeke kanjalo. Ngendlela, uyiwele. Ngoba nginomuzwa wokuthi kungaba njalo, wazi umuntu othandana naye, kepha mhlawumbe bekungumngani nje onjengokuthi ngithola ini lapha ku-Eight of Wands.
Kepha ngizwa sengathi kufana nethuba lesibili lakho, futhi ngibona sengathi kufanele ubeke engcupheni ithuba lesibili. Uyazi, unayo leyo foloko ebalazweni lomgwaqo. Nginomuzwa wokuthi kufanele ukhethe indlela entsha engizokutshela yona.
Nginomuzwa wokuthi leli yithuba lami lesibili kepha kuzoba ukuthuthuka. Imfoloko esemgwaqeni ithi unezinketho ezimbili, kusobala okwedlule nesikhathi esizayo, khetha indlela entsha, kepha ngokuqinisekile kufana nendlela ethuthukisiwe. Kunokuthile okukhethekile ozokwenza ngalo mandla.
Izipikili eziyisishiyagalombili. Sikufisela inhlanhla kule ndlela entsha. Abathandi.
Uthando lweqiniso lungena ngawe, kusobala amandla akho kanye namaSithupha amaWands, impumelelo enkulu yakho lapha. Ngingathatha indlela entsha lapha, amawele. Ngingathemba nje injabulo yakho, ngethembe injabulo yakho, noma yini ekujabulisa, bengingasho lapho.
Sizodweba amakhadi embuzo amathathu yebo noma cha manje, amawele. Ngakho-ke sizokwenza eyodwa, ezimbili, kanye nezintathu. Zizwe ukhululekile ukumisa le ndatshana.
Uma kufanele uyimise ukuze uzindle ngemibuzo yakho kepha iGemini yombuzo wokuqala ngingathi yebo, nakanjani iwine. Nginomuzwa wokuthi uphumelela kakhulu ngombuzo wokuqala. Ngizizwa sengathi kunezindaba ezinhle zenombolo yekhadi eyodwa futhi.
Ngekhadi lesibili, ngingathi yebo, ama-wands ayisishiyagalolunye, ngizwa kodwa kungani kukhona okuthile okudinga ukusethwa lapha. Uyazi, ngakho-ke ngizizwa ngithanda ukuchitha isikhathi esithe xaxa, okuningi en Ergy kufanele angene kunoma yini oyicelayo, kepha ngingathi yebo. Futhi ngingathi cha ukubuza inombolo yesithathu, inyanga.
Nginomuzwa wokuthi kunemininingwane eshodayo, okuza emqondweni wami kungadinga imininingwane eyengeziwe ukuthi ingezwe, noma yini oyicelayo, noma cha ngoba nayo, ngizizwa sengathi ayikho nje (iyahlekisa) uyabuza, ngiyaxolisa amawele. Angazi ukuthi ngikhuluma ngani, kodwa noma kunjalo, ngiyabonga ngokuba lapha, amawele. Futhi ngiyakwazisa ngempela.
Lokhu kuhle ukufundwa, ngiyakuthanda. Ngithanda ukuqondiswa okuya khona. Ngakho-ke ngiyabonga ngokuba lapha kwakho, ngiyakwazisa kakhulu.
Qiniseka ukuthi ubuka ilanga lakho, inyanga yakho bese uphuma ukuze uthole isithombe esigcwele salokhu okwenzekayo kuwe kuleli sonto. Zizwe ukhululekile futhi ukuthanda nokwazisa noma yikuphi ukwesekwa, kodwa ngiyabonga Gemini futhi nakanjani ube neviki elihle.
Ngabe u-2020 uzoba unyaka omuhle kumaGeminis?
Uyemukelwa ku-2020, Gemini. Kuyintounyaka omatasa, kepha uma kukhona ongakwazi ukuyiphatha, nguwe. Ukuba nokuningi epuletini lakho akukusabisi. Ukusuka kubathandi kuya kuwo wonke lawo maphrojekthi wokudala, ukhiqiza futhi uzala.2. 3. 2019.
Ngabe u-2021 unyaka omuhle weGemini?
I-Gemini Horoscope 2021: Funda izibikezelo ze-Gemini zaminyaka yonke ze-horoscope zothando, umshado, umsebenzi, izingane. Unyaka ka-2021kuzoba unyaka oxubekile wabomdabu baseGemini. Kusukela ngo-Ephreli kuya ku-Okthoba 2021, izinto zizobe zilawulwa ngandlela thile, uzobona ukudlidliza okuhle ngokuya ngomsebenzi, uzolindela ukukhushulwa okuthile nokukhula kwamaholo.28. 2020.
Yini isilwane somoya sikaGemini?
IGemini (Meyi 21 Juni 20)
Gemini, isilwane sakho somoya sinjaloihlengethwa. Ngaphansi kwakho konke lokho kudlala kanye nelukuluku lakho, ungomunye wezimpawu ezihlakaniphe kakhulu zezinkanyezi, njengehlengethwa ngesinye sezilwane ezihlakaniphe kakhulu. Nobabili nabelana ngesidingo sokufunda kabanzi futhi nihlole umhlaba.20 2020.
Ngabe iGemini ingaceba?
Kufanele balindele ukuthi izimali zabo zishintshe futhi basebenze nalokhu. Kufanele baqale imibono emisha emisha ngemuva kwezinyanga ezintsha futhi bavame ukuba ne-imali engcono kakhulu ezungeze iNyanga ephelele. Banomuzwa onamandla maqondana nemali ngakho-ke kufanele bahlale beyisebenzisa njengoba ibaholela kunala!
Yini okuhle kweGemini emisebenzini?
OkunconoimisebenziOkweIGeminifaka intatheli, umakethi, uthisha, umbhali, umhlahlandlela wezokuvakasha, umculi, usosayensi, uchwepheshe wezokuxhumanaishumi nanye. 2019.
Yiziphi izinsuku ezinhle zeGemini ngoMashi?
Ithuba, inselelo, imali, nezinsuku zothando zeGemini ngoMashi, kufaka nezinsuku lapho kufanele uziphathe kahle khona nalapho uthando lulula ukuluveza noma ukuluheha. Bheka futhi iGemini Daily Horoscope neGemini Monthly Horoscope. Amakhalenda Wezinsuku Zokuzalwa Eziningi Ezinhle (Zezimpawu Ezihlukile):
Yiliphi ikhalenda elihle kakhulu le-Gemini ascendant?
Amakhalenda alandelayo akhombisa izinsuku lapho iNyanga, iLanga, namaplanethi angaphakathi athanda imisebenzi ethile yalabo abazalwa ngaphansi kwesibonakaliso seGemini nakubantu abaneGemini Ascendant. Ikhalenda likhombisa izikhathi zamathuba, kanye nezinsuku lapho ukuqapha okwengeziwe kufanele khona. Qaphela ukuthi lamakhalenda asetshenziswa kahle ngophawu lwe-Ascendant yakho.
Ngabe inyanga kaJuni yinyanga enhle yeGemini?
Inyanga kaJuni izohamba kahle maqondana nempilo yothando kwabomdabu baseGemini, kepha kuzodingeka ubekezele kakhulu ngalesi sikhathi. Uzoba nesici seJupiter endlini yakho yesihlanu, ngakho-ke, kuzoba nokuthambekela okukhethekile engqondweni ebuhlotsheni obuhle nothandekayo.